लकडाउन अबधीभर घरमै रहेका शिक्षकलाई कसरी कोरोना पोजिटिभ देखियो ? - Gulminews
लकडाउन अबधीभर घरमै रहेका शिक्षकलाई कसरी कोरोना पोजिटिभ देखियो ?
२०७७ जेष्ठ ७, १९:२१
७ जेठ, गुल्मी । गुल्मीका कोरोाना संक्रमित शिक्षकलाई कसरी कोरोना पोजिटिभ देखियो भन्ने बारे गाउँपालिकाले अध्ययन सुरु गरेको छ । गाउँपालिकाले बुधवार एक बिज्ञप्ती जारी गर्दै ’लकडाउन अबधीभर घरमै रहेका उहाँलाई कसरी कोभिड-१९ को पोजेटिभ कसरी देखियो भनेर अध्यन भइरहेको जनाएको छ ।
उनको हालको स्वास्थ्य अबस्था र घर नजिकै क्वारेन्टाईन थियो भन्ने समाचार भ्रामक भएको बिज्ञप्तीमा उल्लेख छ । क्रिमसन अस्पतालले समेत गुल्मीका संक्रमित शिक्षक आईसियुमा उपचारत भएको तर अबस्था भने गंभिर रहेको बिज्ञप्ती मार्फत जनाएको छ ।